Daawo Sawirada Lamaane Is Jecel Marka Aad Aragto Muuqaalkooda Iyo Sida Ay U Kala Dheeryihiin Ay Layaab Kugu Noqoneysa - Galmada.net
Jaceylka ayaa la sheegaa in uu yahay mid aan indho laheyn una muuqan qurux ,dhiriri iyo gaabni waxaana halkaan idinkugu soo bandhigeynaa labo lamaane oo Jaceyl ka dhaxeeyay hadana muuqaalkooda aad u kala duwan yahay marka ay wada joogaan .
Gabar u dhalatay Dalka China loona caleemo saaray in ay tahay gabadha ugu dheer dadka da’dooda ka yartahya 20-sano jirada ah ayaa waxa ay saaxiib la tahay wiil aad ugu gaaban waxbana ka gaaban marka ay wada joogaan dadkuna indha la raacaan marka ay wada socdaan.
Labada Lamaane ayaana waxaa u dhaxeeya Farqi aad u weyn dhinaca dhirirka gabadha ayana qiyaasta dhirirkeeda lagu sheegay 2,03 Mitir halkla wiilka gabadhan gacaliyaheeda ahna isna lagu sheegay 1,60 Mitir dhirirkiisa.
Warbaahinta Caalamka ayaana aad usoo bandhigtay Muuqaalka lamaanahan iyadoona dad badan oo arkay aad aad ula yaabeen marka loo eego gabadhan iyo Wiilka oo markii ay doonayaan in ay is dhunkadaana wiilku ku qasbanaanaayo in uu is dheereeyo halka gabadha iyana lama huraan ay tahay in ay soo fooraarsadto oo is gaabiso maadama ay wax badan ka dheer tahay.
Shumis.net Kala Soco Arimaha Bulshad
ila Tali : kalsooni badan ayaan siiyay, balse arin xanuun badan ayuu igu abaal guday.!